भाग्यमानी छोरा : भाग ६ - बहिनी रुबिनाको मुखमा मुख मैथुन
यस भागमा बहिनी रुबिनासंग पहिलो पटक मुख मैथुन अर्थात ओरल सेक्स अनुभव सम्बन्धि प्रसङ्ग रहेको छ । कसरी दाईले बहिनीलाई ओरल सेक्सको लागि मनाइन त थाहा पाउन पूरा कथा पढ्नुहोस् ।
भाग्यमानी छोरा - भाग ५ [Previous Episode]
जब बुबाको बिस्तरामा हामी पुग्यौं तब रुबीनाले भनि “बुबाले आमालाई कति पटक चिक्नु भयो होला है यो बेडमा ?” “यो बेडमा बुबाले मात्रै होईन मैले पनि चिकेको छु नि आमालाई, अझ आमालाई यहींबाट नै मैले चिक्ने बाटो बनाएको हो नि ?” त्यसपछी आमा र मेरो बिचको पहिलो दिनको कहानी मैले रुबीनालाई सुनाएँ र कसरी बुबा नआएको दिन मैले आमालाई त्यो बिस्तरामा चिकें भनेर बताएपछि रुबीनालाई बेडमा सुताउँदै भनें “ल आज तँ मेरो आमा बनेर मसँग चिका' !” रुबीनाले “दादा ! म हजुरको आमा भएर होईन बहिनी नै बनेर चिकाउन चाहन्छु...!” अनि टाङ्ग फट्याएर पुती फ्याँ पारेर बसी ।
मैले सिधै उसको पुतीमा मुख जोडेर चाट्न सुरु गरें । भर्खरै नुहाएकोले होला रुबीनाको पुती चाट्दा छुट्टै किसिमको अनुभुति भइरहेको थियो । एकछिन रुबीनाको पुती चाट्दा नै रुबीनाले पुती अलि बढी पोलेको जस्तो भयो भनेपछी मैले रुबीनालाई भने “ल छोड्दे अहिलेलाई भोलि बिहानै चिक्छु तँलाई... बरु अहिलेलाई मेरो लाँडो चुसिदे...” रुबीनाले मैले भनेझैं गरि मेरो लाँडो चुस्न थाली । मैले आफ्नो ईच्छानुसार रुबीनालाई लाँडो चुस्न लगाइरहेको थिएँ र साथमा उसलाई लाँडो चुस्ने तरिका सिकाउँदै पनि थिएँ । तर लाँडो चुस्ने सवालमा रुबीना अझै दुई-कदम अगाडी बढी र उसको मुखको थुकले थुकिलो भएको मेरो लाँडोलाई हातले खेलाउँदै रुबीनाले मेरो लाँडो भन्दा मुनिको गेडा अर्थात् अण्डकोष समेतलाई खेलाउँदै चुस्न थाली । पालैपालो उसले गेडा अनि लाँडो चुस्दैरही, घरिघरि रुबीनाले मेरो गेडाभन्दा अझै मुन्तिर चाकमा पनि चाटेर चाकको प्वालमा जिब्रो छिराउन लागेझैं गर्थी । रुबीनाको यो लाँडो भन्दा बेगरको एक्स्ट्रा चुसाई र चटाईले म अझै बढी आनन्दित भएको थिएँ । रुबीनाले मेरो लाँडोको सुपारीलाई दाँतले कुतुर कुतुर पार्दै चुस्दै निकैभित्रसम्म पुर्याउन कोशिस गरि । झण्डै मेरो लाँडोलाई उसले गलासम्म पुग्ने गरि चुसिरहेकी थिई । त्यसमा मैले उसको टाउको समातेर लाँडोलाई जरैसित उसको मुखभित्र धकेल्ने कोशिस गरें । त्यसो गर्दा रुबीनाको सास अड्केला जस्तो भईसकेको हुन्थ्यो र मैले हल्का लाँडोलाई बाहिर निकाल्थें । त्यसो गर्दा गर्दै मेरो लाँडोले रुबीनाको मुखभित्र झण्डै गलानिरनै फुसी वाक्यो र रुबीनाको मुखभरी भयो । मेरो लाँडोबाट निस्केको फुसी रुबीनाको मुखमा नअटेर ओंठबाट तल झर्न सुरु गर्यो । झरेको फुसीलाई रुबीनाले बुबाको बिस्तराको सिरानमा भएको टिस्यु-पेपरले पुछि र दौडदैं बाथरुम गई अनि बेसिनमा मुखमा भएको फुसी ओकलेर आई ।
म त्यतिकै सिथिल भएको थिएँ । त्यसैले सुस्ताउन थालें, रुबीना बुबाको ट्याब्लेट खोलेर चलाउन थाली । केहिबेरमै ब्लु-फिल्मको जस्तो साउण्ड ट्याब्लेटबाट आयो, मेरो ध्यान पनि ट्याबतिरै गयो । रुबीनाले ट्याबलाई हल्का मतिर ढल्काएर देखाईदिई र भनि “बुबाको ट्याबमा पनि रै’छ त ?” रुबीना र मैले बुबाको ट्याबमा भएको ब्लु-फिल्मको भिडीयोहरु हेर्न थाल्यौं । तर त्यहाँ भएको भिडीयोमा केटाले केटीको पुतीमा नभई चाकमा चिकेको थियो । रुबीनाले “छ्या ! चाकमा पो चिकेको छ त ?” मैले रुबीनाको पोका समाउँदै भनें “तँ पनि छिराउँछेस् की चाकमा !” “छि, जे पायो त्यही पनि गर्छन् ! खै अर्को हेरौं... त ?” त्यस ट्याबलेटमा भएको सबै भिडियो चाकमा चिकेको मात्रै थियो । मैले रुबीनालाई भने “सायद: आमाले बुबालाई चाकमा चिक्न दिनुभएको भए, मैले आमालाई चिक्न पाउँदिन थिएँ जस्तो पो लाग्यो मलाई ?” “हुन सक्छ दादा ! तर चाकमा चिक्दा त्यस्तो मजा हुन्छ र ?” “खै ! त्यो त चिकेर बिचार गरेपछी मात्रै थाहा हुन्छ ? मलाई के थाहा छ र ? आमाको पुती पछी तेरै पुतीमा चिकेको त हो !” “तर हुन्छ होला दादा ! मेरो एउटा साथी साह्रैकी भालु छे हरेक हप्ता नयाँ नयाँ ब्वाईफ्रेण्ड बनाउँदै घुम्न जान्छे उसले पनि जुन प्वालमा छिराउँछु भन्छ त्यसैमा दिने त हो नि भन्थी !” “तेरो त्यो साथीलाई बोला न त त्यसको चाकमा चिकेर बिचार गरौं ?” “बोलाउनु त हुन्थ्यो दादा ! तर त्यो जाँठीले त हजुरको र मेरो थाहा पाई भने त डाँडाकाँडा हल्लाउँछे, हुँदैन !” “त्यसोभए कसरी थाहा पाउने होला त !” “टेन्सन् नलिनु न दादा ! बुबा-आमा आउँदासम्म कसो जुगाड नहोला त ? केहि सिप लागेन भने मेरै चाकमा चिकेर बिचार गर्नुहोला नि त ? तर एकपटकको लागि मात्र दिन्छु नि !” मैले रुबीनालाई किस गरें र भनें “केहि गरि तेरो चाकमै मेरो लाँडोको दिल बस्यो भनें ?” त्यस्तै ताल-न-बेतालका गफ गर्दै हामी सुत्यौं ।
सवा पाँच बजे बिहानै उठेर म जगिङ्ग गर्दै पत्र-पत्रिका पनि लिएर आउँछु भनेर निस्किएँ । सात बजेतिर म पसलमै बसिरहेको बेलामा रुबीनाले आफ्नो र मेरो लागि चिया र ब्रेक-फास्ट लिएर आई । रुबीना यति सेक्सी भएर आएकी थिई कि उसको शरिरमा प्लङ्ग मिनी ड्रेस मात्र थियो । उसले ब्रा पेन्टी केहि पनि लगाएकी थिईन । कपडा पनि हल्का पातलो भएकोले नियालेर हेर्दा जोकोहीले पनि रुबीनाको भित्री अंगको रसस्वादन गर्न सक्थ्यो । अरु त अरु रुबीना हल्का झुकि भने पनि उसको कपडा लत्रिएर उसको छाती पुरै उदाङ्गो हुन्थ्यो भने उसको ढाडतिर त पुरैनै खाली थियो । उसलाई एकनजर हेर्ने जोकोहीको पनि लाँडो ठन्किएन भने त्यो नामर्द नै हो भन्दिए पुग्थ्यो ।
रुबीनालाई देख्नासाथ मेरो लाँडो ठनक्क ठन्कियो । त्यो देखेर रुबीना हाँसी । मैले रुबीनाको कानमा खुसुक्क भनें “के हो केटी दुनिया ठहरै पार्ने बिचार छ कि क्या हो ?” रुबीनाले प्रत्युत्तरमा भनि “मैले दुनियाको लागि लगाको हो र हजुरको लागि पो लगाको त !”
आठ बज्नै लाग्दा ग्राहकहरु पातलिईसकेका थिए । स्कूलहरु प्राय: छुट्टी हुने समय भएकोले त्यति व्यापार हुने समय थिएन । दिनमा फाट्टफुट्ट मात्र व्यापार हुन्थ्यो, बुबासँग गफिने मानिसहरु पनि बुबा नभएपछी बस्ने कुरा भएन । मान्छेको आवतजावत नदेख्नासाथ रुबीना मसँग आएर टाँसिई । मैले उसको प्लङ्गमा हात छिराएर हल्का माथी सारें अनि पुठ्ठामा अड्याईदिए र चाकको पुठ्ठालाई मुसार्न थालें । निकैबेर उसको नितम्ब खेलाएपछि रुबीनाले मेरो हात लगेर कपडाभित्र छिराईदिई र मैले रुबीनाको पोका खेलाउन सुरु गरें । रुबीनाले भनी “दादा हजुर लाँडो निकालेर कुर्सीमा बस्नु म चुस्दिन्छु ।“ अनि रुबीना आफैंले मेरो कट्टुबाट लाँडो निकालेर थचक्क सानो मुडामा बस्दै चुस्न थाली, कोहि आउला कि भन्ने त्रासमा जसोतसो रुबीनाले मेरो लाँडोलाई राम्रैसँग चुसिदिई र निकैबेर चुसेपछी मैले रुबीनालाई भनें केटी पुती थाप्न सक्छेस् म चिक्छु तँलाई । उसले हुन्छ भनी र प्लङ्ग अझ माथी सारी र मलाई कुर्सीमै बसाएर मेरो काखमा आएर बसी मैले मिलाएर लाँडो रुबीनाको पुतीमा छिराइदिएँ र त्यसपछी रुबीना सोकेसले छेकिने गरि मेरो लाँडोमा पुतीलाई अघि-पछि गराउन थाली । केहिबेर त्यसरी रुबीनालाई चिकेपछी मैले भनें - 'केटी अब चुसेर झारिदे मलाईं, फेरी कोहि आईहाल्यो भने झ्याउ हुन्छ ।' रुबीनाले मैले भनेको मान्दै फेरी लाँडो चुस्न थाली, केहिबेरमै मेरो लाँडोले रुबीनाको मुखमा फुसी ओकल्यो । झस्केझैं गरि रुबीनाले आफ्नो मुखबाट लाँडो निकाली र मेरो लाँडोबाट निस्केको फुसी रुबीनाको प्लङ्गको मिनी र दुधको पोकाको बिचको खोल्सोमा लाग्यो । जोकोहीले पनि त्यो फुसी नै हो भनेर थाहा पाउँथ्यो । तर रुबीना त्यसपछी भाँडा लिएर तुफान माथी उक्लिई ।
रुबीनालाई चिकेको दोस्रो दिनमै यति उत्साहित भएर जहाँ पाए त्यहीं चिकाउन आतुर हुन्छे भन्ने मैले सोचेको पनि थिईन । साढे नौ बजेतिर पसल बन्द गरेर म माथी उक्लिएँ । रुबीना किचनमा खाना बनाउँदै थिई । उसले बिहान लगाएकै कपडा लगाएकी थिई । म सरासर गएर रुबीनालाई पछाडीबाट अँगालोमा लिएर मुखमा मुख जोडेर थुक साट्न थालें । उसको कपडाभित्र हात छिराएर दुवै पोका पनि मसल्न थालें । केहिबेरमै रुबीना उत्तेजनामा आई । मैले रुबीनाको प्लङ्गको घाँटीमा रहेको गाँठो फुस्काईदिएँ । अब रुबीना कमरभन्दा माथी पुरै नाङ्गै थिई । मैले दुवै हातले रुबीनाका पोका खेलाउँदै रुबीनाको गर्धनमा कानको पछाडीतिर चुम्बन गर्न थालें । रुबीनाले हात पछाडी ल्याएर मेरो कट्टुभित्र छिराई र लाँडो समातेर खेलाउन थाली । त्यही क्रममा मैले रुबीनाको कम्मरबाट प्लङ्गलाई तल तल सार्दै भुईमा पुर्याईदिएँ अनि पोकाबाट हात हटाएर उसको पुतीको वरपर दल्दै खेल्न थालें । पुतीको वरपर हात दल्दादल्दै मैले हातको माझी औंला रुबीनाको पुतीमा छिराईदिएँ अनि रुबीनाले “सिऽऽऽऽऽ... ईऽऽऽऽ.... सऽऽऽऽ उम्म्म…!” गरी ।
यतिबेला रुबीनाको शरिरमा कुनै पनि कपडा थिएनँ । मैले रुबीनालाई बोकेर डाइनिङ्ग टेबुलमाथि सुताईदिएँ अनि टाङ्ग फट्याएर रुबीनाको पुती चाट्न थालें । रुबीनाको पुतीको ओंठ खोलेर टिसी चाट्दा रुबीना सिरिङ्ग सिरिङ्ग भएजस्ती हुन्थी । रुबीनाको पुती चाट्दा चाट्दै मैले रुबीनाको टाङ्गलाई छातीतिर धकेलेर चाकको प्वाल देखिने गरि मिलाएँ र जिब्रोलाई रुबीनाको पुतीदेखि चाकको प्वालसम्म चाट्नमा व्यस्त गराएँ । जब जब चाकको प्वालमा मैले जिब्रोले हल्का स्पर्श गर्थें, रुबीना हाँस्थी । त्यस्तैमा रुबीनाले भनि “दादा ! चाकमा चिक्न दिन्छु के भन्याथें तपाईले त अहिले नै तयारी गर्न थाल्नुभयो जस्तो छ ।“ मैले पनि रुबीनाको चाकको प्वालमा जिब्रो निकैबेर घुमाएर छोडें अनि रुबीनाको पोकालाई जोडले निचोर्दै भनें “यति सेक्सी आफ्नै दाईसँग चिकाउन तयार भएर बसेकी बहिनीले चाकमा पनि चिक्न दिन्छु भनेपछी त तयारी त गर्नैपर्यो नि !” त्यतिभन्दै मैले चोर औंलालाई मुखमा हालेर थुकले भिजाएँ अनि रुबीनाको चाकको प्वालमा बिस्तारै ठेल्दै चाट्दै थुक लगाउँदै गरें । निकै गाह्रो गरि मेरो चोर औंला उसको चाकमा थोरै छिर्यो । रुबीनाको चाकमा एउटा हातको चोर औंला छिराएर खेल्दै गर्दा मैले उसको पुतीलाई अर्को हातको औंलाले खेलाईनै रहेको थिएँ ।
घरि घरि म रुबीनाको पुतीलाई पुरै मुखभित्र लिने प्रयत्न पनि गर्थें । “दादा ! हजुर त खप्पीस हुनुहुँदो रहेछ !” मैले प्रत्युत्तरमा भनें “बिस बर्षभन्दा बढी अनुभव भएकी आमालाई पाँच-छ महिनादेखि चिक्दा यति पनि नजाने त बरबादै भईहाल्यो नि ?” मैले अझै थपें “अब तैं भन त आमाको बिस र मेरो थप गर्दा त झण्डै एक्काईस बर्षको अनुभव त भयो नि ?”
“दादा ! अब त लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गर्नु न ? खपिनसक्नु भयो मलाई त !” मैले रुबीनालाई बोकेर बैठकमा ल्याएँ अनि सोफामा बसाएर रुबीनाको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न थालें । सोफामा निकैबेर चिकेपछी रुबीनाले खानाको चिन्ता गरि । मैले रुबीनाको पुतीबाट लाँडो नछुटाई रुबीनालाई बोकेर त्यही अवस्थामै बिस्तारै चिक्दै फेरी किचनमा पुर्याएँ । रुबीनाले मसँगबाट छुट्टिएर चुलो बन्द गरी । मैले रुबीनाको चाकपट्टीबाट पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न थालें । जब मेरो लाँडोले फुसी झार्ने बेला भयो मैले रुबीनालाई भुईंमा घुँडा टेकेर बस्न लगाए अनि भनें “चुस् मेरो लाँडो... चुस् तेरो दाईको लाँडो... आज मेरो लाँडोको पानी चाख्...” अनि पिचिक पिचिक गर्दै रुबीनाको मुख तथा अनुहारमा फुसी झारिदिएँ । रुबीनाको मुखभरी फुसी थियो । रुबीनाले त्यो फुसी निल्न घिन मानिरहेकी थिई, मैले उसको मुखभन्दा बाहिर लागेको फुसी पनि औंलाले टिपें र रुबीनाको मुखभित्र छिराउँदै भनें “घुटुक्क पारेर निल् न ! के हेरिरा’की...” रुबीना बोल्न सक्ने अवस्थामा थिईन तर ईशाराले निल्न सक्दिन भन्ने जनाउ गरिरहेकी थिई ।
मैले रुबीनाको घाँटी निमोठ्दै उठाएर आफ्नो लेबलमा उभ्याईदिएँ अनि रुबीनाको मुखमा आफ्नो मुख जोडेर सास फुकिदिएँ साथमा निमोठेको घाँटी छोडिदिएँ । नचाहँदा नचाहँदै रुबीनाको गलाबाट मेरो लाँडोले ओकलेको फुसी छिर्यो । रुबीना उल्टी गरुलाझैँ छटपटिईरहेकी थिई । मैले हत्केलाले रुबीनाको पुतीमा थुक दल्दै चार-पाँच पटक थप्काएँ । त्यसपछी फेरी रुबीनालाई बोकेर सोफामा पुर्याएर सुताउँदै उसको मुखमा लाँडो छिराएर भनें “एकछिन् चुस्दे न !” रुबीना नतमस्तक भएर मेरो लाँडो चुस्दै रही । रुबीनाले लाँडो चुसिरहँदा मैले रुबीनालाई गेडा र चाकको प्वालमा पनि चाट्न लगाएँ ।
खाना खाँदाखेर रुबीनाले मलाई सोधी “हजुरले मेरो चाकको प्वाल चाटेको देख्दा त चाकमै चिक्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्याथ्यो !” मैले रुबीनालाई भनें “तँलाई साह्रै हतार छ जस्तो छ चाकको प्वालाँ छिराउन ! अब म तल गएपछी चाकमा तेल लगाएर अलि चिप्लो पारेर बसिराख... आज तेरो बेलुका तेरो चाकमा चिक्छु तर एउटा सर्त है त ?” “के सर्त दादा !” “त्यो सर्त म चिक्नेबेलामा नै भन्छु…।
भाग्यमानी छोरा - भाग ७ [Continue Reading]
भाग्यमानी छोरा : भाग ६ - बहिनी रुबिनाको मुखमा मुख मैथुन 2017-09-05T13:18:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Nepali Sex Story Sex Story
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: भाग्यमानी छोरा : भाग ६ - बहिनी रुबिनाको मुखमा मुख मैथुन